Magical Bridge, dia fototra iray vao nahazo $ 250.000 avy amin'i Apple | Avy amin'ny mac aho
Matetika Apple dia manome fanomezana sasantsasany indraindray ary amin'ity tranga ity ny Magical Bridge Foundation dia nahazo vola be avy tamin'i Apple. Ity dia vola izay azo raisina tsara fa ity fototra ity izay natokana ho amin'ny famolavolana sy fananganana kianja filalaovana vaovao sy anisany ho an'ny rehetra, na inona na inona fahaizany na fahasembanana.
Notarihin'i Olenka Villarreal, Jill Asher, ary Kris Loew ny fototra, ary any Palo Alto no misy azy. Nisokatra ho an'ny besinimaro ity fototra ity tamin'ny volana aprily 2015, ary atao doka ho kianja filalaovan'ny karazan'olona rehetra ka nijery azy ireo i Apple mba hanatanteraka izany fanomezana ara-toekarena manan-danja 250.000 $.
Iray amin'ireo mpanorina ny Bridge Magical, Olenka Villareal, nanao fanambarana tamin'ny haino aman-jery taorian'ny nahafantarany ny fanomezana nataon'i Apple:
Mahazo ny fanahin'ny Silicon Valley vaovao, ny Innovation Zone dia manolotra traikefa filokana tokana sy ifandrimbonana amin'ny alàlan'ny teknolojia, zavakanto ary famolavolana handrisihana ny fahatsapan'ny olombelona rehetra amin'ny fomba vaovao iray manontolo. Ny nofinofy hananganana toerana majika vaovao ahafahan'ny tsirairay manana ny fahaiza-manao mahatsapa fa ny fahalalahana amin'ny alàlan'ny lalao dia lasa zava-misy noho ny orinasa toa an'i Apple sy ireo mpiara-miasa sisa tavela aminay izay tena nanolo-tena tamin'ity vondrom-piarahamonina ity, ireo mponina sy mpitsidika azy ireo.
Tsy misy zavatra betsaka holazaina momba an'ity karazana hetsika ataon'ny Apple ity, satria momba ny famatsiam-bola very fa manome ny maha-olombelona ny orinasa momba ireo orinasa, fototra ary fikambanana tsy mitady tombom-barotra. Ny fidirana dia miavaka amin'ny vokatra Apple rehetra ary tsy isalasalana fa ity dia hita amin'ny macOS sy iOS, avy eo tsy maintsy ampiana ireo karazana fanomezana tsindraindray sy maharitra ataon'ny orinasa ireo ary manana fitambarana tonga lafatra isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Magical Bridge, dia fototra iray vao nahazo $ 250.000 avy amin'i Apple